January 2020 – Arakan Yoma
Posted on January 31, 2020 February 8, 2020 by Editor
(Unicode Version) အီဟော်ဘော်ရင်တယ်ရိုးမေရဒီယိုသတင်းထောက်”ကိုထူး” ဒီထူယစ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တင်တယ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသအက်ကမ့်ဥလပ်ယောမစ်၊အီ၊အာပါနီမာလ်ယောဘီချီနယ်လပ်တယ်ဗူဂျူရစ်ကာငတ်ရားကင်ယောနော်အာညင်နော်ပါရစ်ကာငတ်ရားကင်ရဲ့ဒူယာ၊ဘော်ဂင်ဒေသသောနော၊ဒူယာဆော၊ချူဂင် ဒေသ၊ဖာရာဝါနီသောဂူရိအာစောင်းအီကင်မာန့်ရဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်ပေါက်တောဆောလ်ရောသောဘီချီးဂေါ်ရောင်းကာငတ်ရားရဲ့ကောတောဒေသတုံ့ဒူရိနင်ကူဒီဇာကာဘီဂျာဇာ၊ကီဒူလာဂေါ်ရောင်းကီဒူလာမာမာလာအာသပ့်ကော်ဂျပ်ယာဝိုင်းရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောသောကာငတ်ရားကင်ဂူရိဂျောင်းတယ်မာနုကျော့တုံ့ပူဇားလူထူယီတဲ့သမ်းကူဒေဂါးယုံကာငတ်ရားကင်တယ်ဥညာကင်လိုပေါ်ရောက်တီငါဘီချီးနော်လာဂီနင်ဂူရိပါရစ်တယ်ကင် ကင်အင်ကမ့်သီယာလိုက်ဂိုလ်ရိုလ်မာနုလိုက်ကီဘာကင်အက်ကမ့်ပေါက်တောဆောလ်ရောဥလပ်ဒူယာ၊ဂင်၊မူလ်ကာဇာအာစောင်းတဲ့ဖာရာအုံးတယ်အီကင်မာန့်ရဲ့ဂေါ်ရောင်းတယ်ကာငတ်ရားရဲ့နော်လို၊ဗုချီဒူဘာ၊ဒုလ်လိုဒူရီယောရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောဘီဂျာအာစောင်းတီငါနယ်လာဂျီယောရဲ့ဖာရာဇာညင်ကီနီညာယောအာသပ့်ပေါက်တောဆောလ်မြို့မဓျေးဆိပ်ကမ်းကာဇာသောအာသပ်တယ်ကိုအောင်ကျော်လှဥလပ်ကာငတ်ရာကီနပ်တယ်(10 စုနှစ်အက်ကမ့်တုံဘီချီအုလ်တပ်ဒယ်ကီနပ်၊မာလာနောရောင်းယာဥလပ်စစ်တွေဆောလ်ရောကီနောင်တယ်ဂေးမ၊မြေညို၊မာလာနောရောင်ကီနောင်တယ်ယောအာသပ့်တပ်ဒယ်မေလာ၊မောရောကီနပ်ကာငတ်ရားကီနပ်တယ်ကင်ဂူရိပိုက်ကူလပ်တီငါဘီချီးလာဂတ်ကာငတ်ရားရဲ့ထူဗစ်ကူလပ်အက်မစ်၊အာဒါးမစ်ပါရစ်မော်တောဂါရီပီဂျပ်လာမီလပ်သပ်မော်ရောင်းတယ်အီဒူလာဥလပ်အက်မစ်ထုပါရစ်ဘီလီကူလက်ဖာရာတုံစက်လှေလိုဘီဂျာအာ ဂျောင်းတယ်ကာငတ်ရားရဲကိုအောင်ကျော်လှဒေါ်ဝါးနော်ကာငါရာဇ်ပေါ်ရားဒူရီလိုဘာနပ်ပေါက်တောဆောလ်ရောတုံမင်းပြား၊မန္တလေး၊တရုတ်၊ဘားမားကာဇာမူဆယ်ဆောလ်ရောတူလီဂျောင်ခေါရင်နော်ဒိန်ဥလပ်ရေခဲဒီနင်၊ရေခဲဗူးသောဘောရစ်ထွားပေါ်ရဲ့ကာငတ်ရားရဲ့ပါနီနော်ဒီနင်(3/4)ဒိန်ထုပါရစ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဥလပ်ဇာလ်နော်ပါရစ်ဇာက်လိုပါစ်ရွာပေါ်ရဲ့အာဂယ်အက်ဗာလ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဥညှင်ဂါရိဖီရီအာဂျား ပူရစ်ဘီလီကိုအောင်ကျော်လှဒိုင်သောကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့မောင်ထွန်းနိုင်လင်းကူဒေဂါးလော့(11 kg)အာသပ်တဲ့ကာငတ်ရားအက်ဗူးရစ်ဟာဒေါက်အာဇာ၊အက်လက်လိုကီနီနင်ဒိုင်ညော်ဒေါ်ဝါးဖီရီဘီဂျီလပ်(2)'(3)လက်လိုဘီဂျပ်တရုတ်ဘီဇူးလ်ဥလပ်ကာငတ်ရားအက်ဗူးရဲ့(3)လက်ပါမော်တောဂါရိဥလပ်မန္တလေး၊မူဆယ်သောတရုတ်အုံဒေါလ်ကာဒီဖယ်လာစ်ကာငတ်ရားအက်ဗူးခိုရိုစ်ကူရိ၊တီငါဒေါလ်ပါဘာစ်ကူလပ်အဓိကကာငတ်ရားရဲ့ဆာ ညှမ်းတရုတ်ဒါ့တ်သောပို့လ်ထားလပ်ဒေါလ်ပိုက်မောက်ဂေါဒါ့တ်တုန့်ကာငတ်ရားဘာရားဂျီဂျောင်တယ်သောဇာငင်ကောင်ဥလပ်၊ကောင်နော်ဥညင့်ဘီလောင်အော့ဂျပ်ယောအာသပ့်အက်ကာဘီလောင်ဥလပ်တယ်ကီချူးနော်အောဒိန်ဘီချီဒယ်ရီဥလပ်ကာငတ်ရားအုံးမော်ရောင်အီဒူလာအောဂျပ်ယာဝိုင်းကာငတ်ရားဒူရီဘီဂျောင်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုက်မာမာလာနော်ဥလပ်ယောကီနီနင်ဥညှာဒါ့တ်ဘာရာဂျီဂျောင်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုက်ဂူနား အောပေါက်တောဆောလ်ရောတုံ့ကာငတ်ရားကင်ဂူဂျောင်းတဲ့မာနုကျော့ဘီဂျီရစ်တုံ့ဦးဝင်းလှိုင်တယ်ကူဒေဂါးလော့တပ်အီကင်မာန့်ရဲ့(2000)ဘောဆောရောတူဒီဂူရိအာယစ်လိုက်အီကင်မာန့်ရဲ့ဘူဇာတ်တဲ့မာနုအက်စောင်ကာငတ်ရားဒိုင်ဂူရိနော်ပါရစ်ဆာမ့်တယ်ဒေါလ်ရောကော်ဒါးလိုနော့အဓိကဇာငင်အာဇာလိုလာဂတ်တယ်ကာငတ်ရာကင်ဂူရိနင်မူနာဘားနော်အောဂျပ်နောကာငတ်ရားမော်ရာသောအာသပ်တယ်အဓိကတယ်မောက်ဂေါ ဒါ့တ်နယ်လပ်တယ်ကာငတ်ရားအုံးကီဒူလာပါရားဂျီးပါရိဘော်ဆာယောရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောကာငတ်ရားကီနပ်တယ်ဒိုင်အက်ကမ့်သပ်အာသပ်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောကာငတ်ရားရဲ့ပေါက်တောဆောလ်ရောအဓိကဂူလပ်ယောကာငတ်ရားမူလပ်မူနာဘားနော်အော့တပ်တောင်၊တောင်ကုတ်ဆီဒီစက်လှေလိုဘာရားဂျားပေါ်ရစ်အူဒီလူမိလ်လပ်ကာငတ်ရားအုံးမော်ရောင်းတယ်ကာငတ်ရားအုံးတယ်ဇာငင်လောဘာဆားပေါ်ရဲ့တရုတ်ဒါ့တ်သောကာငတ် ရားဘာရာဂျားဂေလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်တင်တယ်ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဆားရဲ့အာဂယ်တူဒီဘာရားဂျောင်းဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှ၊မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်တုံ့ဇာယောရဲ့ဘားမားဒါ့တ်ဧရာဝတီရစ်ဆာလပ်ဒေါလ်ကောင်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောတောင်ကုတ်ကာငတ်ရာကူလပ်ဒေါ့လ်ဂေါင်တယ်သီလောက်ကပ်အာဇာမာမာလာအာသပတဲ့လိုက်ဘီလီဦးဝင်းလှိုင်ကူဒေဂါးလော့အာဂယ်ဘင်္ဂလာတုံကာငတ်ရားနော်ဘာရားဂျပ်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်တုံဘာရားဂျားလိုတာရားယောဘာရားဂျောင် တယ်အီနားဥလပ်ဘင်္ဂလာတုံလေယာဉ်လိုဘာရားဂျောင်ဘားမားဒါ့တ်ဖားရီယောရဲ့တရုတ်သိဒီလေယာဉ်လိုဘာရားဂျပ်ဘားမားဒါ့တ်သောတယ်သီဒူလာဂူရိဂျီးညားနော်ထားဘားမားဒါ့တ်တုံနယ်လပ်တဲ့ကာငတ်ရားဗူဂျူရစ်ဧရာဝတီကာငတ်ရားသပ့်ဒေါလ်မောင်ဂါးတယ်ကော်လတီကောင်တယ်လိုက်ကျော့လိုက်ကူလပ်အာဇာကောင်တယ်လိုက်တရုတ်ဒါ့တ်မူဆယ်ဆောလ်ရောဒါဘာလူမာစ်မူဆယ်လူမားလိုတရုတ်သောဘာရားဂျီးလပ်ဒေါ့လ်မောင်ဂါးပါ ဧရာဝတီလိုမောက်ဂေါဒါ့တ်ကာငတ်ရားဆောငေါ့နပ်ဘီဂျီလပ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ကာငတ်ရားဒေါလ်နော်ပိုက်မေ က်ဂေါဒါ့တ်မာသပ်ယောတောင်ကုတ်ကာငတ်ရားဒေါလ်မောင်ဂါးပါဂျပ်ဆမ့်တယ်ဇာငင်အာဇာကောင်တယ်လိုက်ကာငတ်ရားကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့ကိုအောင်ကျော်လှဝါဆမ့်ကူဒေဂါးလော့ဘင်္ဂလာဒူလာလေယာဉ်လိုဘာရားဂျီးပိုက်လပ်ဂါလိုက်မူနာဘားထာအီနားတယ်ဇာငင်လောမော်ရောင်လိုက်မောက်ဂေါဒါ့တ်မြောက်ပိုင်းကာ ငတ်ရားတယ်ကော်လတီယောကောင်ဘီဂျပ်တယ်ဇာဂါယောအာသပ်ဥလပ်ယောဘာရားဂျားသောဇာငင်လောမော်ရောင်တယ်လိုက်မူနာဘားနော်နပ်လပ်ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဒူလာလေယာဉ်ဘာရားဂျီပိုက်လပ်ဧရာဝတီ၊တောင်ကုတ်ဒူလာဘာရားဂျီးပါရစ်ဖင့်ဂူရိဂျီညာမာနုလာဂတ်ကာငတ်ရားကင်ဂူဂျောင်တယ်နော်လက်ပိုက်အာသပ်တဲ့ယာဝိုင်းဇာငင်အာဇာကောင်နော်ဂျပ်လိုက်အီကင်လိုပါစ်ပါလိုက်အာသပ်တဲ့မာနုလိုက်၊ဂါဘာမန်လုက်အခြန်တီငါပါ ဂျပ်ဇာငင်အာကမ့်နာဒီဇာက်………… (Zawgyi Version) အီေဟာ္ေဘာ္ရင္တယ္ရိုးေမရဒီယိုသတင္းေထာက္”ကိုထူး”ဒီထူယစ္တယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္တင္တယ္ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းေဒသအက္ကမ့္ဥလပ္ေယာမစ္၊အီ၊အာပါနီမာလ္ေယာဘီခ်ီနယ္လပ္တယ္ဗူဂ်ဴရစ္ကာငတ္ရားကင္ေယာေနာ္အာညင္ေနာ္ပါရစ္ကာငတ္ရားကင္ရဲ့ဒူယာ၊ေဘာ္ဂင္ေဒသေသာေနာ၊ဒူယာေဆာ၊ခ်ဴဂင္ ေဒသ၊ဖာရာဝါနီေသာဂူရိအာေစာင္းအီကင္မာန႔္ရဲ့ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာေသာဘီခ်ီးေဂၚေရာင္းကာငတ္ရားရဲ့ေကာေတာေဒသတုံ႔ဒူရိနင္ကူဒီဇာကာဘီဂ်ာဇာ၊ကီဒူလာေဂၚေရာင္းကီဒူလာမာမာလာအာသပ့္ေကာ္ဂ်ပ္ယာဝိုင္းရဲ့ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာေသာကာငတ္ရားကင္ဂူရိေဂ်ာင္းတယ္မာႏုေက်ာ့တုံ႔ပူဇားလူထူယီတဲ့သမ္းကူေဒဂါးယုံကာငတ္ရားကင္တယ္ဥညာကင္လိုေပၚေရာက္တီငါဘီခ်ီးေနာ္လာဂီနင္ဂူရိပါရစ္တယ္ကင္ ကင္အင္ကမ့္သီယာလိုက္ဂိုလ္ရိုလ္မာႏုလိုက္ကီဘာကင္အက္ကမ့္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာဥလပ္ဒူယာ၊ဂင္၊မူလ္ကာဇာအာေစာင္းတဲ့ဖာရာအုံးတယ္အီကင္မာန္႔ရဲ့ေဂၚေရာင္းတယ္ကာငတ္ရားရဲ့ေနာ္လို၊ဗုခ်ီဒူဘာ၊ဒုလ္လိုဒူရီေယာရဲ့ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာဘီဂ်ာအာေစာင္းတီငါနယ္လာဂ်ီေယာရဲ့ဖာရာဇာညင္ကီနီညာေယာအာသပ့္ေပါက္ေတာေဆာလ္ၿမိဳ႕မေဓ်းဆိပ္ကမ္းကာဇာေသာအာသပ္တယ္ကိုေအာင္ေက်ာ္လွဥလပ္ကာငတ္ရာကီနပ္တယ္(10 စုႏွစ္အက္ကမ့္တုံဘီခ်ီအုလ္တပ္ဒယ္ကီနပ္၊မာလာေနာေရာင္းယာဥလပ္စစ္ေတြေဆာလ္ေရာကီေနာင္တယ္ေဂးမ၊ေျမညိဳ၊မာလာေနာေရာင္ကီေနာင္တယ္ေယာအာသပ့္တပ္ဒယ္ေမလာ၊ေမာေရာကီနပ္ကာငတ္ရားကီနပ္တယ္ကင္ဂူရိပိုက္ကူလပ္တီငါဘီခ်ီးလာဂတ္ကာငတ္ရားရဲ့ထူဗစ္ကူလပ္အက္မစ္၊အာဒါးမစ္ပါရစ္ေမာ္ေတာဂါရီပီဂ်ပ္လာမီလပ္သပ္ေမာ္ေရာင္းတယ္အီဒူလာဥလပ္အက္မစ္ထုပါရစ္ဘီလီကူလက္ဖာရာတုံစက္ေလွလိုဘီဂ်ာအာ ေဂ်ာင္းတယ္ကာငတ္ရားရဲကိုေအာင္ေက်ာ္လွေဒၚဝါးေနာ္ကာငါရာဇ္ေပၚရားဒူရီလိုဘာနပ္ေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာတုံမင္းျပား၊မႏၲေလး၊တ႐ုတ္၊ဘားမားကာဇာမူဆယ္ေဆာလ္ေရာတူလီေဂ်ာင္ေခါရင္ေနာ္ဒိန္ဥလပ္ေရခဲဒီနင္၊ေရခဲဗူးေသာေဘာရစ္ထြားေပၚရဲ့ကာငတ္ရားရဲ့ပါနီေနာ္ဒီနင္(3/4)ဒိန္ထုပါရစ္ေဘာင္ဒူလာရိုက္ဥလပ္ဇာလ္ေနာ္ပါရစ္ဇာက္လိုပါစ္ရြာေပၚရဲ့အာဂယ္အက္ဗာလ္ေဘာင္ဒူလာရိုက္ဥညႇင္ဂါရိဖီရီအာဂ်ား ပူရစ္ဘီလီကိုေအာင္ေက်ာ္လွဒိုင္ေသာကင္ေဂၚရစ္တဲ့ေမာင္ထြန္းနိုင္လင္းကူေဒဂါးေလာ့(11 kg)အာသပ္တဲ့ကာငတ္ရားအက္ဗူးရစ္ဟာေဒါက္အာဇာ၊အက္လက္လိုကီနီနင္ဒိုင္ေညာ္ေဒၚဝါးဖီရီဘီဂ်ီလပ္(2)'(3)လက္လိုဘီဂ်ပ္တ႐ုတ္ဘီဇူးလ္ဥလပ္ကာငတ္ရားအက္ဗူးရဲ့(3)လက္ပါေမာ္ေတာဂါရိဥလပ္မႏၲေလး၊မူဆယ္ေသာတ႐ုတ္အုံေဒါလ္ကာဒီဖယ္လာစ္ကာငတ္ရားအက္ဗူးခိုရိုစ္ကူရိ၊တီငါေဒါလ္ပါဘာစ္ကူလပ္အဓိကကာငတ္ရားရဲ့ဆာ ညႇမ္းတ႐ုတ္ဒါ့တ္ေသာပို႔လ္ထားလပ္ေဒါလ္ပိုက္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္တုန႔္ကာငတ္ရားဘာရားဂ်ီေဂ်ာင္တယ္ေသာဇာငင္ေကာင္ဥလပ္၊ေကာင္ေနာ္ဥညင့္ဘီေလာင္ေအာ့ဂ်ပ္ေယာအာသပ့္အက္ကာဘီေလာင္ဥလပ္တယ္ကီခ်ဴးေနာ္ေအာဒိန္ဘီခ်ီဒယ္ရီဥလပ္ကာငတ္ရားအုံးေမာ္ေရာင္အီဒူလာေအာဂ်ပ္ယာဝိုင္းကာငတ္ရားဒူရီဘီေဂ်ာင္တယ္ေဒၚဝါးလိုက္မာမာလာေနာ္ဥလပ္ေယာကီနီနင္ဥညႇာဒါ့တ္ဘာရာဂ်ီေဂ်ာင္တယ္ေဒၚဝါးလိုက္​ဂူနား ေအာေပါက္ေတာေဆာလ္ေရာတုံ႔ကာငတ္ရားကင္ဂူေဂ်ာင္းတဲ့မာႏုေက်ာ့ဘီဂ်ီရစ္တုံ႔ဦးဝင္းလွိုင္တယ္ကူေဒဂါးေလာ့တပ္အီကင္မာန႔္ရဲ့(2000)ေဘာေဆာေရာတူဒီဂူရိအာယစ္​လိုက္​အီကင္​မာန႔္ရဲ့ဘူဇာတ္တဲ့မာႏုအက္ေစာင္ကာငတ္ရားဒိုင္ဂူရိေနာ္ပါရစ္ဆာမ့္တယ္ေဒါလ္ေရာေကာ္ဒါးလိုေနာ့အဓိကဇာငင္အာဇာလိုလာဂတ္တယ္ကာငတ္ရာကင္ဂူရိနင္မူနာဘားေနာ္ေအာဂ်ပ္ေနာကာငတ္ရားေမာ္ရာေသာအာသပ္တယ္အဓိကတယ္ေမာက္ေဂါ […]
(Unicode Version) Arakan Yoma| ဘားမားဒါ့တ်တင်သောထာမ့်ပါကျစ်ယဉ်ကျေးမှုဇာကာအက်ကမ့်အောတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်းရဲ့UNESCOစူမစ်ဖင့်လျှောက်လွှာတူလာအုလ်မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဒေါ်ဝါးကူလက်တယ်ကော်ဒါးသောအီနားတူလာလက်တယ်လျှောက်လွှာဝန်းရဲ့ဇန်နဝါရီ(27)ဒိန်တူလီလက်တယ်အီနားတူလီလက်တယ်လျှောက်လွှာသောအမွေအနှစ်လိုဆာလပ်ကုလသမဂ္ဂပညာရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံအဖွဲ့ယူနက်စ်ကိုတုံအက်စောင်နော်ရစ်ယောဟော်ဘော်နောဒီနင်အီဘောဆောရှောင်တခင်အာယောရဲ့ပူဇားလူဇာဘော်တူလီလက်တယ်လျှောက်လွှာဇီနှိပ်သောမြောက်ဦးနန်းတော်၊ဘာသာရေး၊စီးပွားရေးလိုကူထူယ်တဲ ကော်ဒါး(25)ဇာတ်အာလ်ဘီလီထာမ့်ပါလာမ့်အီဒူလာလျှောက်လွှာအာဂယ်ယော(2019)ဘောဆောစက်တင်ဘာဆာမ့်နော်တူလီလက်သီဘီဂျီရစ်မြောက်ဦဇုံသောသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ယော(27)လိုအာလီဂတ်ယာ(1044)ရင်ရဲ့ဟီစတိုရီယာယောလီဂီနင်တူလီလက်မြောက်ဦးဆောလ်ရင်းရဲ့UNESCOစူမီဘာရင်းရဲ့အာဂယ်(2017)ဘောဆောရေတူဒီဂူရိအာယစ်တယ်(2020)ဘောဆောရောအောဖင့်ဂူရိဘော့အာဂယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဓညဝတီ၊လေးမြို့၊ ဝေသာလီ၊မြောက်ဦးခေတ်(4)ခေတ်ထားလပ်ယောမြောက်ဦးခေတ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုယောစီးပွားရေး၊လူမှုရေးသောယောနင်ဒင်ဂွဘီလီဟီစတိုရီဗုလ်သောလီဂီထူယစ်အီနာဥလပ်(500)ဘောဆောရောတုံဘီချီအုလ်ဘားမားဒါ့တ်သောပျူဆောလ်အက်ကမ့်သပ်UNESCOစူမိနင့်အီနားမြောက်ဦးဆောလ်ရင်ရစ်ယော UNESCO စူမစ်ဖင့်အစိုးရအရပ်ဖက်အဖွဲ့၊ဒါ့တ်တော်မာနု၊ဥညာဒါ့တ်တုန့်ဇီနှိပ်ပါဂျပ်ဒေါ်ဝါးလိုဒေါ်လာဥယောရဲ့ကင်ဂေါ်ရစ် ဘီလီမြောက်ဦးမြို့ရှေ့ဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနတုံ့ကူလက်…. ….. (Zawgyi Version) Arakan Yoma| ဘားမားဒါ့တ္တင္ေသာထာမ့္ပါက်စ္ယဥ္ေက်းမႈဇာကာအက္ကမ့္ေအာတယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေျမာက္ဦးေဆာလ္ရင္းရဲ့UNESCOစူမစ္ဖင့္ေလၽွာက္လႊာတူလာအုလ္ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕ေဒၚဝါးကူလက္တယ္ေကာ္ဒါးေသာအီနားတူလာလက္တယ္ေလၽွာက္လႊာဝန္းရဲ့ဇန္နဝါရီ(27)ဒိန္တူလီလက္တယ္အီနားတူလီလက္တယ္ေလၽွာက္လႊာေသာအေမြအႏွစ္လိုဆာလပ္ကုလသမဂၢပညာေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သိပၸံအဖြဲ႕ယူနက္စ္ကိုတုံအက္ေစာင္ေနာ္ရစ္ေယာေဟာ္ေဘာ္ေနာဒီနင္အီေဘာေဆာေရွာင္တခင္အာေယာရဲ့ပူဇားလူဇာေဘာ္တူလီလက္တယ္ေလၽွာက္လႊာဇီႏွိပ္ေသာေျမာက္ဦးနန္းေတာ္၊ဘာသာေရး၊စီးပြားေရးလိုကူထူယ္​တဲ ေကာ္ဒါး(25)ဇာတ္အာလ္ဘီလီထာမ့္ပါလာမ့္အီဒူလာေလၽွာက္လႊာအာဂယ္ေယာ(2019)ေဘာေဆာစက္တင္ဘာဆာမ့္ေနာ္တူလီလက္သီဘီဂ်ီရစ္ေျမာက္ဦဇုံေသာသမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ေယာ(27)လိုအာလီဂတ္ယာ(1044)ရင္ရဲ့ဟီစတိုရီယာေယာလီဂီနင္တူလီလက္ေျမာက္ဦးေဆာလ္ရင္းရဲ့UNESCOစူမီဘာရင္းရဲ့အာဂယ္(2017)ေဘာေဆာေရတူဒီဂူရိအာယစ္​တယ္​(2020)​ေဘာ​ေဆာေရာေအာဖင့္ဂူရိေဘာ့အာဂယ္ေမာက္ေဂါဒါ့တ္ေသာဓညဝတီ၊ေလးၿမိဳ႕၊ ေဝသာလီ၊ေျမာက္ဦးေခတ္(4)ေခတ္ထားလပ္ေယာေျမာက္ဦးေခတ္တယ္ယဥ္ေက်းမႈေယာစီးပြားေရး၊လူမႈေရးေသာေယာနင္ဒင္ဂြဘီလီဟီစတိုရီဗုလ္ေသာလီဂီထူယစ္အီနာဥလပ္(500)ေဘာေဆာေရာတုံဘီခ်ီအုလ္ဘားမားဒါ့တ္ေသာပ်ဴေဆာလ္အက္ကမ့္သပ္UNESCOစူမိနင့္အီနားေျမာက္ဦးေဆာလ္ရင္ရစ္ေယာUNESCOစူမစ္ဖင့္အစိုးရအရပ္ဖက္အဖြဲ႕၊ဒါ့တ္ေတာ္မာႏု၊ဥညာဒါ့တ္တုန႔္ဇီႏွိပ္ပါဂ်ပ္ေဒၚဝါးလိုေဒၚလာဥေယာရဲ့ကင္ေဂၚရစ္ ဘီလီေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေရွ႕ေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနတုံ႔ကူလက္……. ….. 267 total views,2views today
Posted on January 30, 2020 February 2, 2020 by Editor
(Unicode Version) ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလျောက် ငါး၊ ပုစွန်နဲ့ ရေသယံဇာတပေါကြွယ်ဝပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဂဏန်း ကလည်း မပါမဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဂဏန်းလုပ်ငန်းကိုဆိုရင် ပင်လယ်တွေ၊ မြစ်အကြီးကြီးတွေရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာ မဟုတ်ဘဲ မြစ်ငယ်တွေ၊ ချောင်းတွေရှိတဲ့ ဒေသတွေနဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြတာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုရင် ဒီလုပ်ငန်းဟာ ပေါက်တောမြို့နယ် မှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ ဂဏန်းတွေကို […]
Posted on January 30, 2020 February 8, 2020 by Editor
(Unicode Version) ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရေ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်ခုဖြစ်တေအလျောက် ငါး၊ ပုစွန်နဲ့ ရီသယံဇာတပေါကြီွဝပါရေ။ ယင်းအထဲမှာ ဂဏန်းက လေ့ မပါမဖြစ်ပါဝင်ပါရေ။ ဂဏန်းလုပ်ငန်းကိုဆိုကေ ပင်လယ်တိ၊ မြစ်အကြီးတိရှိရေ ဒေသတိမှာထက် မြစ်ချေတိ၊ ချောင်းတိရှိရေ ဒေသ တိနဲ့ ကျေးရွာတိမှာ ပိုလို့လုပ်ကိုင်ကတ်စွာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုကေ ဒေလုပ်ငန်းရေ ပေါက်တောမြို့နယ်မှာ ပိုတွင်ကျယ်ပါရေ။ ဒေတစ်ပါတ်မှာတော့ကေ ဂဏန်းတိကို ဇာဒေသတိမှာ […]
မြောက်ဦးကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်နိုင်ရေး အပြီးသတ် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်း
Posted on January 30, 2020 January 30, 2020 by Editor
(Unicode Version) Arakan Yoma| မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် (UNESCO) စာရင်းဝင်းနိုင်ရေးအတွက် အပြီးသတ်အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ပြောဆိုချက်အရ လက်ရှိတင်သွင်းထားသည့် အဆိုပြုလွှာကို ဇန်န ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့က တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တင်ပြထားသည့် အမွေအနှစ်များအား ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် […]
ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း – ဇန်နဝါရီ စတုတ္ထသီတင်းပတ် [မြန်မာဘာသာအစီစဉ်]
Posted on January 28, 2020 February 2, 2020 by Editor
ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း – ဇန်နဝါရီ စတုတ္ထသီတင်းပတ် [ရခိုင်ဘာသာအစီစဉ်]
မြောက်ဦးကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွီအနှစ်စာရင်းဝင်နိုင်ရေး အပြီးသတ်အဆိုပြုလွှာတင်သွင်း
Posted on January 28, 2020 February 8, 2020 by Editor
(Unicode Version) Arakan Yoma| မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တေ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် (UNESCO) စာရင်းဝင်းနိုင်ရေးအတွက် အပြီးသတ်အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ခဗျာလ်ဖြစ်ပါရေ။ မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ပြောဆိုချက်အရ လက်ရှိတင်သွင်းထားရေ အဆိုပြုလွှာကို ဇန်နဝါ ရီလ ၂၇ ရက်နိက တင်သွင်းခစွာဖြစ်ပနာ တင်ပြထားရေ အမွီအနှစ်တိကို ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနန့် […]
ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း – ဇန်နဝါရီ စတုတ္ထသီတင်းပတ် [ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနေမူဆလင်ဘာသာစကားအစီစဉ်]
ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း – ဇန်နဝါရီ တတိယသီတင်းပတ် [ရခိုင်ဘာသာအစီစဉ်]